bakka-bu’aan kutaa Koloraadoo - Kongiresmaan Maayik Kofmaan,
Mana-maree Bakka-bu’ootaa Yunaayitid Isteets, Koree dhimmoota alaa keessaa yeroo dheeraaf ka tajaajilan – bakka-bu’aan kutaa Koloraadoo - Kongiresmaan Maayik Kofmaan, kaleessa mana-maree bakka-bu’ootaa guutuu duratti haasawa dhageessisaniin, haala-qabinsa mirga dhala-namaa Itiyoophiyaa tarreessuudhaan, akka koongiresiin yokaan manni-maree wixinee seeraa sanatti sagalee kennuun dabarsu gaafatan.
Haala qabinsa mirga dhala-namaa fi deemsa ijaarsa dimookiraasii Itiyoophiyaa sirreessuutti ka fuuleffate – wixineen seeraa Yunaayitid Isteets tokko gara murtiitti akka dhihaatu, miseensi mana-maree dhaga’ama qaban tokko gaafatanii jiran.
Adoolessa dabre kana ka seericha wixine koree dhimmoota alaa, kan Mana-maree Yunaayitid isteets duratti dhihaatee, sagalee guutuudhaan gara mana-maree bakka-bu’ootaatti ka dabre – wixineen seeraa kun, miseensota mana-maree dimookiraatotaa fi ripublikaanotaa 70 ol ta’aniin sagaleen itti kenname ka deggerame.
“Kabajamoo dura-taa’aa mana-maree, har’a gidduu keessanitti argamee, mootummaan Itiyoophiyaa lammiwwan isaa irratti ukkaamsaa fi gochaa gara jabinaa itti fufinsaan raaw’ataa jirun isiniif dhiheessa. Miseensonni mana-marees, wixinee seeraa 128 kana irratti akka sagalee kennitaniin isin kadhadha” jechuun gaafatan – Kongiresmaan Maayik Kofmaan.
Kan Achi Buuteen Dhabame Angawaa Afgaanistan Barbaadamaa Jiru: Paakistaan
Shakkamaan Shororkeessaa Magaalaa New York Du’aan Adabamuu Qaba: Prezidaant Traamp